SomaliTalk.com » masjid
Home » Qoraallada Halkudhegga "masjid"
Khudabadii Jimcada ee Sheikh Umal: isku dirdirka iyo dhibaatooyinkeeda
Khudbada Jimca (April 6, 2012) uu jeediyey Sheekh Maxamed Cabdi Umal, kuna saabsanayd “isku dirdirka iyo dhibaatooyinkeeda” oo video ah daawo / dhegeyso Read More →
Kaalmo Loo Doonayo Masjidkii Ugu Weynaa Soomaaliya Oo Dhismihiisu Socdo.
Gudiga Masjidka Weyn ee Magaaladda Baydhabo, waxay Walaallahooda Muslimiinta ee ku nool daafaha caalamka ka codsanayaan, in ay gacan ka geystaan qaybaha ka harey dhismaha Masaajidkii ugu weynaa dalka soomaaliya oo laga dhisayo magaaladda Baydhabo. Dhismaha masjidkan waxaa uu ka kooban seddax dabaq, Dhismihiisuna waxaa uu socdey muddo hal sanno ah, intii uu socdey waxaa gacan ka geysanayey dhamaan...
Maxaad kala socotaa Waxqabadka Golaha Isutagga Masaajidda W/Ameerika
Warbixin: Golaha isutaga masaajida ee waqooyiga Ameerika waa jamciyad khayri ah ama organization non profit ah. Waxaana la aas aasay dhamaadkii sanadkii 2000kii,wuxuusa si rasmi ah u dhaqangalay sanadkii 2001dii UJEEDOOYINKII LOO AAS AASAY:- 1-Dhismayaasha Masaajida iyo Maraakista Islaamiga ah. 2-Midaynta Awooda Masaajida iyo Maraakista jaaliyada . 3-Xalinta qilaafaadka jaaliyada mid good iyo mid gaar...
Somali Cause strongly condemns the attack on Mogadishu Mosque, the unending civilian casualties in Somali clashes
May 6, 2010 The ongoing conflict between the Transitional Federal Government (TFG) forces and the opposition groups has caused heavy casualties and the displacement of thousands of civilians mainly women, children and the elderly. The government forces with the support from African Union Troops (AMISOM) on one side and the Al-Shabaab and Hizbu-Islam extremist forces on the other have shown little...
Xafiiska Qarammada Midoobay u Qaabilsan Arrimaha Siyaasadda Soomaaliya (UNPOS) WARSAXAAFADEED 09/2010 Nairobi, 2 May – Ergeyga Gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Ahmedou Ould-Abdallah, wuxuu si kulul u cambaareeyay qaraxyadii shalay ka dhacay Masjidka Cabdalla Shideye ee ku yaalla suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho qaraxyadaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen Soomaali...